Allsomali24.com | Breaking News & Somalia's First Updated News » Maqaalo
Maqaalo FAALLO – Warqad Ku Socota Qurbojoogta Reer Minneapolis, ee gobolka Minnesota April 7, 2014 MAQAAL - Magaalada Minneapolis, ee gobolka Minnesota waa magaalada ay degan yihiin Qurbojoogta racii ugu horeeyey ee ka soo qaxay dagaalkii sokeeyey ee wada
MAQAAL – Urugada Islii anagaa eedeeda iska leh! Oo sabab?!! BY-Maxamed Xaaji April 7, 2014 MAQAAL - Soomaali hadaan nahay waxaan nahay bulsho ku caan baxday inay kaliya cabaadaan marka ay la kulmaan cawaaqib xumada cillado ay iyaga iyo iyaga oo qu
MAQAAL XIISO LEH – Maxaan ka baran karnaa xasuuqii Rwanda? By- C/rashiid Muuse April 4, 2014 MAQAAL (Allsomali24) - Muddo 20 sano ayaa ka soo wareegtay markii dadka wadanka Rwannda ay muddo 4 bolood ka yar iska xasuuqeen dad ku dhow hal malyuun oo MAQAAL – Qurbojoogta: Maxaa Ka Jira Dhaqan Xumada Lagu Sheego? April 2, 2014 Muqdisho (Allsomali24) - Marka hore iga gadooma afeeftaan: waxaan aaminsahaya in ALLAH uu na siiyey diin macaan, oo ay ku cadahay wixi xun iyo wixi fiic
BAQAAD CULUS: Degmo-nimada Kaxda Waa Lamataabtaan! March 28, 2014 Muqdisho(Allsomali24.com) – Baaq — Anaga oo ah Beel waynta Fiqi Cumar, Sheikhaal oo ay ku jiraan reer Jazeera iyo reer amiin, Hawiye, waxaan baaq cad ka s
MAQAAL – Midowga Yurub oo Soomaaliya ka Dhigtay Xabaalaha Qashinqubka Sunta March 27, 2014 Maqaal (Allsomali24) - Soomaaliya xukunkii milatariga ee ku dhisnaa kelitalisnimada wuxuu baray in xoog waxkasta lagu muquuniyo, dagaalogayaasha beelaha oo aa
Faallo:- Gobalka Banaadir xalaaleeyn buu u baahanyahay! March 27, 2014 Muqdisho(Allsomali24.com) – C/Qaadir Maxamed Cismaan, “Cabdiboqor” - Salaanta Islaamka kabacdi, Qormadu waxeey dulmar yar ku sameeyndoontaa taariikhda m
Maqaal Xiiso Leh: Dowlad Goboleed Shisheeye ku Daaban! March 26, 2014 Muqdisho(Allsomali24.com) – Qoraa Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdiraxiin Hilowle Galayr ayaa qoray qormadani oo uu ugu magac daray mowduuca kor kaaga muuq
MAQAAL – Siyaasada Soomaaliya Furaheeda iyo Qufulkeeda yaa hayo? By- Bashir A Yusuf March 23, 2014 Maqaal (Allsomali24) - "Cano nabad lagu waayey Colaad lagu Lagunma helo " Maah-Maah Somaliyeed.
Horta Soomalidu ma fahansan tahay dhibka hayo in meelo ka bax
Faallo:- Astaanteenna Xumee, Waxaa qoray Wariye Cabdulqaadir Dulyar March 22, 2014 Muqdisho (Allsomali24) – Alaha u wada naxariistee waxaa sanadkan waqtiyo is xig xiga geeriyooday dad bulshada Soomaaliyeed magac iyo maamuus ku lahaa Sida R